Baarlamaanka oo walaac ka muujiyay ammaanka PL [ Dhageyso]
May 9, 2015 (GO)- Xildhibaan Cabdicasiis Siciid Maxamuud oo ka tirsan Baarlamaanka Puntland ayaa dowladda uu madaxwaynaha ka yahay Cabdiwali Cali Gaas ugu baaqay inay is-badal ku samayso xaaladda ammaan.
Xildhibaan Gacameey ayaa sheegay inuusan jeclayn Shacabka Puntland inay ku noolaadaan welwel sidaasi darteedna loo baahan yahay is-badal muuqda oo dhanka ammaanka lagu sameeyo.
''Xukuamdda uu hormuudka u yahay Prof.Cabdiwali Gaas, Amniga Puntland maanta waa loo jeedaa, waxaan ku boorinayaa una sheegayaa in xaaladda Amniga wax laga qabto oo wax laga badalo, siday hadda wax ku socdaan ma filayo in lagu daawan karo, ma jecli dadka Puntland inay cabsi ku noolaadaan''.
Inkastoo uusan faah faahin halka ay wax ka qaldan yihiin, haddana hadalka Xildhibaankan ayaa kusoo aadaya xilli magalada Gaalkacyo wax yar ka dib sallaadii Markib ee xalay lagu dilay Xildhibaan Siciid Xuseen Nuur.
Ururka Al-Shabab ayaa weeraro kala duwan ka gaystay bilihii lasoo dhaafay magalada Bosaso, kuwaasoo lala beegsaday mas'uuliyiin dowladda ka tirsan iyo baro kantarool oo ciidamada boolisku gaadiidka ku baaraan.
Agaasimeyaasha wasaaradaha Jubbaland oo digniin loo diray 16.11.2019. 22:23
Beesha Caalamka oo bogaadisay is-afgaradkii Farmaajo iyo Uhuru 16.11.2019. 21:17
Biixi: Dowladda Farmaajo waxay u soo tababaraneysaa Somaliland 16.11.2019. 17:32
Puntland iyo UK oo kawada hadlay doorashada iyo siyaasada Soomaaliya 16.11.2019. 15:20
Madaxweyne isbitaal loola cararay kadib xanuun lasoo darsay 16.11.2019. 15:06
Taliyeyaal loo magacaabay amniga Aadan Cadde iyo Miina Baarista 16.11.2019. 14:17